artixlin & pl@tf0rms: June 2006
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေကြီး သခင်ကြီးရဲ့ အတွေးကောင်းကောင်းနဲ့ native မှာ ဟာသ လုပ်ထားတဲ့ signature ပါ... အလေးအပင်တွေများနေတဲ့ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ပြုံးချင်လို့ပါ...
အခုမှထပြီး ဖွရှုပ်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ရိုးအမှန်ဗျို့...စတွေ့ကတည်းက ကြိုက်လို့ သိမ်းထားတဲ့... အမှတ်တရလေး ပါ......ဆရာသမားရေ.......
T@g: artixlin,Fun,funny signature
posted by linko at 12:03 AM | links to this post
အားလုံးကို အောင်မြင်စွာ banned လိုက်ကြပါပြီ...ဘယ်နေ့တော့ ဘယ်အပေါက်က ပြန်ဝင်ရမယ် မသိပါ.... ကျွန်တော့် မှာလည်း ဘာ ခံစားချက်မှ မရှိတော့ပါ...တွေးပြီး ဆွေးမနေ ဖြစ်အောင် အလုပ်တွေရှုပ်နေတာကိုပဲ ကျေနပ်နေမိတော့တယ်...သတိရတော့လည်း တယ်လီဖုန်းလေး ဆက်တာ ပေါ့..... အားလုံးကောင်းပါတယ်..မကောင်းရင်လဲ.. အခွင့်အရေးလေး တူချင်သပ ဆိုရင်လဲ.. ထွက်တော်မူ နန်းကခွာ ပေါ့ကွယ်.. ထွက်ခွင့်ပေးထားတာပဲ...အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရဲ့ ကဗျာ ထဲက စာပိုဒ်လေး တစ်ခုကိုတော့ ကိုယ့်အတွေး နဲ့ကိုယ် ပြန်ရွတ်နေမိပါတယ်.......
posted by linko at 10:49 PM | links to this post
ဒီနေ့တော့ အလုပ်တော်တော်ရှုပ်သွားတယ် . အပေါင်းအသင်းတွေဆီ ဖုန်းဆက် ကျော်ခွနည်းလေးများ ကြိုရှာ ထားကြပါပေါ့ . ငါကတော့ အစတည်းက မကြိုက်တဲ့ meebo နဲ့ gmail-lite ကိုပဲ အောင့်နမ်းနေရပြီ လုပ်ကြပါဦး ပေါ့. ဒါတွေလည်း မကြာမီ လာမည်ပေါ့ .. ကိုယ့်ထက် ရင်နာနေရတဲ့ သူတွေကိုလည်း အားပေးပေါ့..စတင်ပြီး အကျိုးခံစား နေရပါပြီ..ဖုန်းခွန် သွားဆောင်သောအခါ ပိုခံစားရပါတော့မည်.....
သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ မသုံးတတ်တာနဲ့ ပစ်ထားတဲ့ bagan mail account ကိုလည်း သွားပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးတတ် အောင် ကြိုးစားရ ပါဦးမည်.....
gtalk နဲ့ပဲ ဆုံဖြစ်နေတဲ့ အရပ်ရှစ်မျက်နှာက အပေါင်းအသင်းတွေ အတွက်တော့ အဆက်အသွယ် ပျက်ပြီ မို့ စိတ်မကောင်း တော်တော် ဖြစ်ရပါတယ်..ရွှေမန္တလေးကတော့ ဒီနေ့ထိ 0K ပဲဆိုပါလား.. ကောင်းပ ...ခေါ်ကြပါ တယ် မန္တလေးလာဖို့ ... သွားချင်ပါတယ်..ဒီ့ပြင် ကိစ္စနဲ့တော့...လစဉ်ကြေး ၃၅ကျပ် ပေးသုံးပြီး တော့မှ သူများလို အခွင့်အရေး တန်းတူမရတဲ့သူ မလို့ ဒီဘ၀ ဒီမျှသာရှိပါစေတော့.....gmail-lite သုံးရနေတုန်း data ရွှေ့ပြောင်းရေး
လုပ်နေရပါတယ်...connection ကလဲ ကောင်းမှကောင်းဆိုတော့..အင်း.... စိတ်ပျက်စရာကလဲ ကောင်းမှကောင်း ပါပဲ.......
posted by linko at 10:29 PM | links to this post
ခံစားလိုက်ရသော နေ့စွဲများ (24,6,06.)
အပြင်မှာ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းပြီး ပြန်ရောက်လို့ computer လေးကောက်ဖွင့် mail လေးဖမ်းစစ် တန်းလုပ်လိုက်ပါ တယ်.
၀င်လို့မရတော့ဘူး.gtalk ဖွင့်ပြန်တော့လဲ အလားတူပဲ. meebo ကနေ ၀င်ပြီး အပေါင်းအသင်းတွေ မေးတော့... မင်းတို့ဆီမှာ banned ပြီတဲ့..သေချာအောင် ၄၄၂၁၁၁၁ ကိုဆက်ပြီးမေးမိပါတယ်.
--- အကို က ခုမှ သိတာလားတဲ့ banned ပစ်လိုက်ပါပြီတဲ့.ဘာကြေငြာချက်မှ အပြင်ကို မထုတ်သေးပဲ ဒီနေ့စ banned ပါတယ်တဲ့.ဘာလို့ မကြေငြာလဲ သိချင်ရင် head office ကို compalin လုပ်ပါတဲ့.. ---
customer တစ်ယောက်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား နဲ့ ခံစားချက်က ဘာမှ အရေးထားစရာ မလိုလောက်အောင်ပါလား..
အခိုက်အတန့်တော့ ကြောင်သွားမိတယ်...နောက်မှ..အော် ... ငါက မြန်မာပြည်က မြန်မာပြည်သား တစ် ယောက် ဆိုတာ သတိရတယ်.
ဟုတ်ပါတယ်လေ.. သူတို့ အဖွဲ့အစည်းက တရားဝင် ပေးထားတဲ့ mail service အကောင်းစားကြီးတွေရှိတာပဲ.ဘာတွေ သောကများရမှာလဲ.. ပိတ်လိုက်တဲ့ mail account မှာပါသွားတဲ့ data တွေအတွက်တော့ တရားနဲ့ဖြေပေါ့.. အမေရှိရက် ဒွေးလေး သွားလွမ်းတာကိုး..
တရားဝင် ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် နားလည်လိုက်ပါတယ်..gmail-lite ကတော့ ရသေးတယ် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ပေါ့.
ဒါပေမယ့် စိတ်အလိုမကျခြင်းက လူကို နိုင်စားသွားပြီ...ဆက်လုပ်ချင်စိတ် တည်ဆောက်မရတော့ဘူး.....
ကျွန်တော်တို့ တွေ ခေတ်မှီတိုးတက်အောင် တည်ဆောက်နေကြတာပဲ လေ.....စိတ်ထိန်းထားရ မှာပေါ့...
အဲဒီည က အိပ်မက် မက်တယ်ဗျ..မိုးကိုလင်းရောပဲ..အားလုံးတော့ မမှတ်မိတော့ ဘူး...အူတွေနာ နေတာတော့ သေချာတယ်.တစ်ညလုံး ရယ်ထားရတာကိုး.......
posted by linko at 9:16 PM | links to this post
posted by linko at 5:38 AM | links to this post
posted by linko at 2:59 AM | links to this post
posted by linko at 5:46 PM | links to this post
သူငယ်ချင်းများ ပေးပို့ တဲ့ ကဗျာတွေ ကို အစကတော့ e-mail ထဲမှာပဲသိမ်း...print လုပ်ပြီး file ထဲ စီထည့်...ဒီနည်းတွေ နဲ့ပဲ လုပ်နေရင်းက..... အခုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကဗျာတွေကို ဒိုင်ယာရီထဲ ကူးမှတ်ခဲ့တာသွား သတိရရင်း Bl0g ထဲရေးထည့်ထားဖို့ စိတ်ကူးလေးရပါတယ်.......
စိတ်ကူးနေတုန်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ..အောင်မျိုး..က ကဗျာတစ်ပုဒ် လှမ်းပို့လိုက်တာနဲ့ အတော်
ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ကဗျာလေးကိုပဲ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ကောက်တင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်.....ပိုကောင်းသွား
posted by linko at 11:20 PM | links to this post
ဒီရက်တွေတော့ အလုပ်ကိစ္စ တွေကိုလည်း လုပ်ရင်း ကိုလင်းဆက်ရဲ့ Essential Tips for Making Myanmar Blog ထဲက ကိုယ်မသိသေးတာ လေးတွေကို စမ်းရင်း နဲ့ အချိန်တွေ လုနေရပါတယ်...လုပ်သင့်တာရော လုပ်ချင်တာတွေရော အားပြိုင်နေတဲ့ နေ့တွေပါပဲ...ဒီအတိုင်းတော့ ပြဿနာ မရှိပေ မယ့် ကိုလင်းဆက် ဆီမှာ link ချိတ်ပြီး နှစ်ရက် အတွင်း counter မှာ 40ကျော်တိုးလာတာ ကို သတိပြုမိ လိုက်ပါတယ်.။.......
counter က 60ကျော်မှာ 20ကျော်လောက်ကတော့ ကိုယ်ဇွတ်ကြည့်ခိုင်းလို့ ကြည့်ရရှာတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်တွေ ဖြစ်နေ လို့ ခံသာပေမယ့်...ကျန်သူတွေကိုတော့ အတော်လေးအားနာမိပါတယ်...
နှစ်ခါ ၀င်ကြည့်ရ လောက်အောင် လည်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိမယ် မထင်မိလို့ counter မှာ ဂဏန်းတစ်ခု တိုးတိုင်း တစ်ခါအားနာ နေရပါတယ်...ဒီ 4-5 ရက်အတွင်းတော့ ကျွန်တော့် Bl0g ဟာ စမ်းချင်တာတွေ စမ်းနေလို့ ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်နေမှာပါ...မျက်စိလည်ပြီး ရောက်လာ သူတွေရော ရောက်ချင်သလို ရောက်လာတဲ့ သူတွေရော အားလုံးကို အလေးထားလို့ ဒီ post မှ တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ.......
posted by linko at 2:55 AM | links to this post
posted by linko at 7:15 PM | links to this post
Amateur photographer တစ်ယောက် ၏ မှတ်တမ်းများ သိမ်းဆည်းရန်...
စိတ် ၏ အဟာရများ နေရာချရန်...
နှလုံးသား တွင် ထင်ဟပ်လာသော ပုံရိပ်များ စုဆောင်းရန်...
ရင်မှ ဖြစ်သော လှိုင်းခတ်သံများ ဟစ်ကြွေး မြည်တမ်းရန်...
သိုမှီးသင့်သော အကြောင်းအရာများ စုစည်းရန်...
အမှတ်တရ အဖြစ်-အပျက်များ ရေးသားရန်...
အလွဲများသော ကျွန်တော့် အတွက် ပြန်လည် ဆန်းစစ်ရန်...
* * * စိတ်-နှလုံးသား တွင် နေရာလပ် ကျန်စေရန် ဤနေရာတွင် ရွှေ့ပြောင်း နေရာ ပေးသည် ။.......* * *
posted by linko at 12:06 AM | links to this post